UMATE 1.24 ujoyine lo mkhwa ulungileyo kwaye ubandakanya Ungaphazamisi imowudi | Ubunlog
UMATE 1.24 ujoyina lo mkhwa ulungileyo kwaye ubandakanya indlela yokungaphazamisi
Izolo ibilusuku olubalulekileyo kubasebenzisi be ... kakuhle, i-GNOME yakudala, le isebenzise Ubuntu de batshintshela kubunye. Okwangoku yaziwa njengoMATE kodwa, njengoko ubona kwiscreen esikulo nqaku, imeko "entsha" yemizobo ayisiyonto ngaphandle kovuko lwe-GNOME 2 oluthandwe ngabasebenzisi abaninzi. Usuku olubalulekileyo izolo kungenxa yokuba yasungulwa inguqulelo entsha yemo engqongileyo, MATE 1.24.0 ukucacisa ngakumbi.
Njengomsebenzisi wesoftware ye KDE kunye nePlasma yayo, ndiyothuka luluhlu lwakho lwezinto ezintsha. I-KDE ikhupha isoftware yayo kwiiphakheji ezahlukileyo, kwelinye icala imeko yemizobo yePlasma, kwelinye icala Izicelo zayo ze KDE nakwelinye ilayibrari yayo (Isakhelo). UMATE ubandakanya yonke into kwinyanda efanayo, uninzi lweempawu ezintsha kwi-MATE 1.24 utshintsho abalwenzileyo kwizicelo njenge-Engrampa okanye iliso lika-MATE.
UMATE 1.24 uza neendaba kwindawo yemizobo kunye neeapps zayo
Phakathi kwezona zinto zintsha zibalaseleyo zika-MATE 1.24, sinezinto ezinje ngezi:
Imeko yedesktop ye-MATE kulula ukuyisebenzisa ukusukela kumzuzu wokungena komsebenzisi. Ngoku ungaseta ukuba zeziphi iinkqubo eziza kuboniswa kuqaliso.
Applet inkqubo yokujonga ngoku inenkxaso yeediski zeNVMe.
El Iziko lolawulo ngoku ibonisa ii icon ngokuchanekileyo kwizikrini eziphezulu.
Modo Sukuzihlupha, Oko kuthetha ukuba izaziso azizukuboniswa ngelixa sizenzileyo. Abaniki zinkcukacha, kodwa kunokwenzeka ukuba ezo zibalulekileyo, ezinjengebhetri esezantsi, ziya kuhlala zisiza.
Zonke izicelo ziye zafuduswa zisuka kwi-intltools ukuya kwi-Gettext.
Dibanisa ngoku inenkxaso yeefomathi ezintsha zefayile.
Iliso likaMATE ngoku isebenza eWayland kwaye songeze inkxaso yeeprofayili zombala.
La Calculator ngoku ikuvumela ukuba ufake "pi" okanye "π".
Gcwalisa uluhlu lotshintsho kwi esi sixhobo.
MATE 1.24 ngoku iyafumaneka kwifom yekhowudi kwaye kungekudala iza kufika njengohlaziyo kwiinkqubo zokusebenza ezinje nge Ubuntu MATE. Xa ufaka ingxelo entsha, zive ukhululekile ukuba uphawule ngokusixelela ngamava akho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Ubuntu » UMATE 1.24 ujoyina lo mkhwa ulungileyo kwaye ubandakanya indlela yokungaphazamisi
I-OpenShot 2.5.0 iza nokukhawulezisa kwe-GPU, i-backups ezenzekelayo kunye nokunye